Na-anwa anwa zụta ụlọ ịsa ahụ na-asa ahụ maka ihe na-erughị $ 20?
Home / Foset Guide / Na-anwa anwa zụta ụlọ ịsa ahụ na-asa ahụ maka ihe na-erughị $ 20?
2020 / 10 / 20 nhazi ọkwaFoset Guide 1226 0
Fosets niile na-ama mma nke ukwuu, mana ọdịiche nwere ike ibu nnukwu! Oke ọnụ ala a ọkpọkọ bụ egwu! You ka na-anwa anwa zụta ya?
Foset atụmatụ a na n'okpuru $ 20
Zinc alloy ese dị ka ọla kọpa alloy
Foset dị ka ihe dị iche iche nwere ike kewaa n'ime igwe anaghị agba nchara, igba ígwè, plastic, ọla kọpa alloy, zinc alloy, polima mejupụtara ihe, wdg. N'etiti ha, mere nke zinc alloy ihe foset n'ozuzu mkpumkpu ndụ, ogbenye kwụsie ike.
Isi mmalite ụlọ ọrụ, na ahịa dị mkpụmkpụ, akụkụ nke ndị nrụpụta na ịchụso mbelata ego, iji ihe ọla kọpa maka ọnụahịa naanị 1/3 nke ihe zinc alloy, n'ihi na zinc n'onwe ya bukwara ibu, ngwaahịa n'onwe ya nwekwara electroplating oyi akwa, ndị nkịtị na-eji ọkụ enweghị ike na-eche site na ibu ibu, ọdịdị nke ndị dị otú ahụ na ngwaahịa na nkịtị dị iche n'etiti ọla kọpa alloy foset. Agbanyeghị, ọkpọkọ zinc alloy bụ nnukwu ihe egwu ahụike nye ndị na - eri ihe, ebe ọ bụ na ị zụ zinc gabigara ókè nwere ike igbochi nsị nke iron na ọla kọpa, na - akpata ụkọ ụkọ iron.
Steel bọl katrij a na-akpọ seramiiki katrij.
Ihe eji eme ka ọkpọkọ ọkpọkọ na-abụkarị bọlbụ nchara na cartridges seramiiki. Ogwe bọlbụ nchara nwere nguzogide nrụgide dị mma, mana mgbanaka akara roba nke na-arụ ọrụ akara dị mfe iji eyi na ịka nká ngwa ngwa. Ceramic katrij bụ ihe okpomọkụ na-eguzogide ma na-eyi na-eguzogide, na nwere ezi akara arụmọrụ, na-eche ihe ọma, ezigbo, na-emeghe, nso ngwa ngwa.
Ya mere, ụlọ ọrụ ahụ kwuru na seramiiki valve isi karịa nchara valvụ valvụ isi chọrọ nkà na ụzụ dị elu na ọnụ ahịa, na ndị na-azụ ahịa enweghị ike ịmata ọdịiche dị na anya gba ọtọ, n'ihi ya, ọ ghọọla ebe isi nweta uru nke ndị nrụpụta enweghị isi. Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ikpe ikpe ziri ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ dabere na mmetụta mgbe ị na-atụgharị aka ahụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị na-azụ ahịa na-agbanye aka, ala, aka ekpe na aka nri, ọ bụrụ na mmetụta nke ịdị nro, enweghị mgbochi ọ bụla, mgbe ahụ akwa mkpuchi ahụ ka mma.
Na-azọrọ ịbụ onye ndu ma ọ bụ obere ndu
Enwere ike ịchọta nleta na ahịa ọkpọkọ mmiri, ugbu a ọ bụghị naanị ịkpọsa ngwaahịa ọkpọkọ anaghị agbasa, ọ bụghị nke nchara, enwere ọtụtụ nnukwu kaadị "enweghị ndu". Foset n'ezie nweta "na-edu ndú" ya?
Sourceslọ ọrụ ụlọ ọrụ, dị ka teknụzụ mmepụta nke ugbu a, nwere ike ịme ọkpọ "obere ụzọ", ọ gaghị ekwe omume ịme "enweghị ụzọ". Yabụ, ọ bụrụ na azụmaahịa na-ekwu na ngwaahịa ahụ enweghị n'efu, ma ọ bụ kwuo obere ụzọ, mana akwụkwọ edere dabara adaba edepụtara, maka ngwaahịa ndị a, ndị ahịa kwesịrị ị attentiona ntị.
Echela na ihe ndị a dị ọnụ ala, obere mma na-enweghị nnukwu nsogbu; ha nwere ike imebi ụlọ gị!
-Mr. Fang, onye bi na Kunlun obibi, kwuru na ebe ọ bụ na ha ebighi n'ụlọ ha ogologo oge, na ha amaghị ụgbọ mmiri gbajiri agbaji na n'ihi nke a, idei mmiri rikpuru ụlọ nke ha na ụlọ ndị agbata obi ha, nke na-akpata mmebi dị ukwuu.
Enwere ụdị ngwaahịa dị iche iche dị na ahịa, ma ogo ya dịgasị iche. Ọ bụrụ n’ịzụta pọmpụ na-adịghị mma, ọ bụghị naanị na-eri oge ma dị oke ọnụ, mana ọ nwere ike itinye ahụike ezinụlọ gị n’ihe egwu.
Etu ị ga - esi hụta ezigbo pọmpụ, biko cheta isi ihe anọ na - esonụ.
Ihe nke ọkpọkọ
Banyere ihe nke ọkpọkọ mmiri, cheta usoro ndị a ▼
Ọ bụrụ na ị ka na-eji ọkpọkọ eji rọba / zinc / cast iron mee, mgbe ahụ ọ na - atụ aro ka ị dochie ha ozugbo! Ogologo oge iji ihe atọ a nwere ike imerụ ahụ mmadụ.
Ps Taps mere plastik na zinc alloy
Plastic foset dị mfe na-emebi, nke kasị nso ọrụ ndụ; zinc alloy ịkpọtụrụ mmiri na-adị mfe ogologo oge, ịhapụ zinc, ụzọ na ọla ndị ọzọ na-emerụ ahụ na ahụ mmadụ; igba ígwè bụ ihe dị mfe nchara, ọ dị mfe ihihi ma bute ahụ ike.
Ọdụ a wụrụ awụ na-adịkarị nchara.
Igwe anaghị agba nchara na seramiiki foset adịghị ize ndụ na ahụ ike, ma n'ihi ntozu oke nke n'ichepụta usoro nke abụọ ihe, mmepụta-akwụ ụgwọ, na ngwangwa nke igwe anaghị agba nchara, seramiiki na-emebi emebi, ha abụọ abụghị nhọrọ kachasị mma maka ọkpọkọ ụlọ.
N’ụzọ dị iche, ọla kọpa ọ bụghị naanị usoro mmepụta ka tozuru oke, gbakwunye na ọ dịghị mfe ịmebi ya, nwere ezigbo mmetụta antibacterial, dị mma maka ọkpọkọ emere. Okpokoro ọla kọpa bụkwa ihe a ma ama na ahịa taa.
Ogo nke spool na-emetụta mmetụta nchekwa mmiri. Enwere isi ihe abụọ dị na plọg na ahịa: seramiiki spool na nchara bọọlụ spool.
A na-atụ aro ka ị zụta seramiiki valve isi. Ọ bụghị naanị na-eguzogide okpomọkụ ma na-eguzogide ọgwụ, ndụ ogologo ndụ, nwere ike igbochi nsị mmiri na-asọ mmiri. Steel bọl katrij dịkwa mma na akụkụ nile nke arụmọrụ, ma e jiri ya tụnyere seramiiki seramiiki, ojiji nke a mkpumkpu oge, mfe ime ka ntapu ntapu mmiri.
Ezigbo onye na-agba mmiri ga-ahụ na mmiri ahụ anaghị agbapụ, na-eme ka mmiri na-asọ nwayọ ma nwee ntụsara ahụ, yana ịchekwa mmiri.
Tupu ịzụrụ ọkpọkọ mmiri, ọ kachasị mma ka ndị na-ere ahịa mee ule mmiri iji nweta nkasi obi na ike iwe mmiri. Ihe ndị ọzọ na-egosipụta na mmiri iyi ahụ, ka mma nke afụ ahụ na ọ ka mma ọrụ nchekwa mmiri.
▲ Inwekwu mmiri na mmiri na-apụta ezigbo mma nke onye na-afụ mmiri.
Wouldn't ga-amaghị ya, ma foset bụkwa onye so na "Ọdịdị Society". Mgbe egweri na nchachacha, ọkpọ na-ete akwa nickel ma ọ bụ chromium ka ọ ghara igbochi oxidation. Nickel ma ọ bụ chromium na-eguzogide ọgwụ hydrochloric na-anọpụ iche ma na-echebe mgbata site na corrosion ogologo oge.
Okpokoro nke a na-amachaghị nke ọma na-emetụta ngwa ngwa.
Mgbe ị na-azụ ahịa, tinye pọmpụ ahụ n'ebe a gbanyere ọkụ nke ọma ma lee ya anya. E nweghị ndị ọxịdashọn tụrụ n'elu nke ọkpọkọ, ọ dịghị pores, ọ dịghị leakage nke plating, na agba na-evenly na-ekesa bụ ezigbo foset.
I nwekwara ike iji usoro dị mfe: pịa mkpịsị aka gị na mkpịsị aka gị, mkpịsị aka mkpịsị aka nwere ike ịgbasa ngwa ngwa bụkwa ezigbo ọkpọkọ.
Nke gara aga :: Methodszọ dị mfe iji rụkwaa ebe mmiri na-adịghị akwụ ụgwọ na usoro 5 dị mfe Osote: Kedu otu esi ahọrọ ma zụta ọkpọkọ mmiri ọkụ na-agba ọsọ?